Football Khabar » बोरुसिया डर्टमुन्डद्वारा १० गोलको वर्षा !
बोरुसिया डर्टमुन्डद्वारा १० गोलको वर्षा !
नयाँ सिजन सुरु हुनुअघि भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा बुन्डेसलिगा क्लब बोरुसिया डर्टमुन्डले फराकिलो जित दर्ता गरेको छ । गत राति भएको खेलमा डर्टमुन्डले तल्लो श्रेणीको जर्मन क्लब स्वीनवर्गमाथि १०–० को फराकिलो जित हात पारेको हो ।
डर्टमुन्डलाई फराकिलो जित दिलाउन म्याक्सिमिलियन फिलिपेले ह्याट्रिक गोल गरे भने टोवियस रस्चलले २ गोल गरे । त्यस्तै, वल्फ, मोरे, एडिनेल र सिन्जी कागवाले १–१ गोल गरे ।
कमजोर टिममाथि सुरुबाटै दबाब बढाएको डर्टमुन्डले पहिलो र दोस्रो हाफमा गरी ५–५ गोल गरेको थियो । फिलिपेले पहिलो हाफको ५ मिनेटमै ह्याट्रिक पूरा गरेका थिए । उनले खेलको ३९, ४० र ४३औं मिनेटमा गरी ह्याट्रिक पूरा गरेका थिए ।
प्रकाशित मिति २८ असार २०७६, शनिबार ०३:४५